'Neptune Frost': A Cyberpunk Anti-Capitalist Queer Love Story
musha	Varaidzo Nhau	'Neptune Frost': A Cyberpunk Anti-Capitalist Queer Love Story
by Brianna Spieldenner April 3, 2022 368 maonero
Neptune Frost nderimwe reaya asingawanzo mafirimu ekuti kana uchiiona, iwe unogona kutaura kuti ichave yechitendero chekirasi chaiyo sezvainobuda. Tichishandisa mamwe emhando yepamusoro uye anobata maziso ekugadzira dhizaini muna 2022 cinema akabatanidzwa necyberpunk, queer, sci-fi African pfungwa, iyi firimu chingori chimwe chinhu chisati chaitwa uye chinofanira kuonekwa nevakawanda sezvinobvira.
Mumhanzi weRwanda wesci-fi, watakabata Boston Underground Film Festival, inotungamirirwa nemuimbi uye mudetembi Saul Williams uye munyori wemitambo uye mutambi Anisia Uzeyman, anoenda ne moniker SWAN. Iyo zvakare inogadzirwa zvakanyanya naEzra Miller (Justice League, Isu Tinofanirwa Kutaura Nezve Kevin) naLin Manuel-Miranda (Hamilton, Encanto).
Zvakatenderwa naKino Lorber
Firimu iri, rakasununguka, inyaya yerudo pakati pevakomana vanotiza uye mugodhi wecoltan, uyo achazove mwana achatungamira boka rekubira pasi pevhu rinoratidza huipi hwenyika.
Pamusoro pefirimu racho, mutungamiriri Saul Williams akati: “Maya Angelou akambotaura kuti chero chinhu chinonyorwa nenyanzvi chinofanira kunyorwa nechimbichimbi chezvavaizonyora kana mumwe munhu akabata pfuti mumuromo. Mamiriro enyika ino nepasirese muromo wangu wakashama zvekumedza nguva dzese. Tinoda hunyanzvi husingatyi kupikisa chimiro cherondedzero yehurongwa hwedu. "
Iyi mhere yekuziva inorembera mufirimu. Nepo zvimwe zviono zvemufirimu uyu zvichivhiringika, shinda yakajeka ndeyevacheri vecoltan vanotambura nebasa rehudzvinyiriri rinouya nekuchera migodhi, asi vachishaya zviwanikwa zvekushandisa tekinoroji yaisagona kuvapo pasina ivo. Makambani eTech akavakirwa kumusana kwevashandi vanoshungurudzwa, uye vatengi havatomboziva nezvekuvapo kwavo.
Nekudaro, iyi firimu inoshanduka kuita yekufungidzira firimu rekutsiva, nevacheri vemigodhi vachishandura tekinoroji yavo kupesana nemapoka chaiwo avakatsigira. Ishoko rinodikanwa kwazvo renguva dzazvino, uye neramangwana.
Kunaka kwese kweiyi firimu kunokwezva: kusanganisa afro-futurism necyberpunk DIY dystopia uye chokwadi chesurreal chezviroto nemimhanzi.
Mugore rakaunza zvakafanana-themed chidzutswa (madingindira evakoloni mune ramangwana regwenga) hazvigone kubatsira asi kucherechedzwa kuti Neptune Frost yakagadzira chigadzirwa chakanga chakanaka uye chisingakanganwiki (kana chisingaiti) kupfuura chidzutswa pamwe nechidimbu chebhajeti. Iyo bhajeti, ichitaura nezvayo, yakatanga paKickstarter uye yakakwevera $ 196,000, kusanganisira kubva kuna Manuel-Miranda, kuitira kuti mutungamiriri anogona kuchengetedza kutonga kwekugadzira.
Yakatanga kunambwa makore anopfuura gumi apfuura, uye yakatanga semazano eBroadway mimhanzi uye graphic novel. Mushonga uyu uchiri kuonekwa mukati Neptune Frost, nezvinoitika zvinoshamisira, nhamba dzenziyo dzakarongwa zvinoorora, uye seti dzakajeka, dzakazadzwa.
Yese yemhando yekugadzirwa kwefirimu iyi inofanirwa kukurukurwa. Kudhura kwacho hakuenzaniswi, kune zvipfeko zvakasiyana uye zvinokatyamadza zvakagadzirwa nemaoko, zvinonyanya kushamisa bhachi rine makiyi ekhibhodi ekombuta akasonwa pamusoro paro.
Makeup mufirimu iri anoisa Euphoria kunyadziswa. Zvese zviri zviviri zvakangoitwa uye zvisingakanganwike, iyo makeup yakagadzirwa nehunyanzvi uye haigone kufuratira.
Maseti mune izvi zvakare akakosha, achichinja pakati penzvimbo inogoneka munzvimbo yemigodhi yeBurundi uye nyika yeramangwana ye-sci-fi, uko mavara akarembera pamadziro akazadzwa nemapuranga edunhu uye CRT terevhizheni. Zvinonzwika semugadziri wekugadzira anoda kugadzira imba yangu.
Ehe, zvinoenda pasina kutaura kuti mimhanzi inofanira kukurukurwa, sezvo iri mimhanzi. Ini handisi munhu anoda zvemimhanzi: Ini handifarire maitiro emumhanzi kana mutambo, asi bhaisikopo iri raive nerwiyo rwakanaka kwazvo, riine nhamba dzemimhanzi dzinobuda.
Zvinenge zvese zvemufirimu uyu zvinoshanda. Kana mumwe mupikisi aifanira kuiswa kwairi, haisi iyo firimu inonzwisisika, yakanyorwa nenhetembo uye inoitika munyika inorota, asi zviratidzo zvinozvitaurira.
Neptune Frost iri nyore imwe yemafirimu anonakidza egore. Iri bhaisikopo randinovimba zvakanyanya kuti richawana tsoka, nekuti pakati pekugadzirwa kwakasvibira uye yepedyo uye yakakosha meseji, inoda kuti ionekwe.
Kana iwe uri rudzi rwemunhu anoda rondedzero yakajeka, izvi zvinogona kunge zvisiri zvako, asi kana uri mazviri nekuda kwemavibes, zvinokufadza iwe zvakanyanya.
Neptune Frost inoparadzirwa naKino Lorber uyo ane tariro achange achiburitsa firimu muAmerican theatre imwe nguva muna 2022, uye achave nekuburitswa kwedhijitari pakushambadzira kwavo Kino Zvino uye mamwe mapuratifomu eVOD. Tarisa turera pazasi.